China 201 inopisa inopisa akakungurusa Stainless simbi coils gadzira uye fekitari | Huaxiao
Sino Stainless Simbi Kugona nezve 201 Hot yakakungurutswa simbi isina simbi coil , 201 HRC
Zvakareruka Kufananidza nezve 201 uye 304
Mukuona kwevatengi vazhinji, 304 simbi isina ngura uye 201 simbi isina chinhu zvingasanzwisisike uye hazvigone kusiyaniswa neziso rakashama. Pano tichaunza dzimwe nzira dzekusiyanisa pakati pe304 na 201.
1.Specifications: Inowanzo shandiswa isina simbi mahwendefa akapatsanurwa kuita marudzi maviri e 201 uye 304, chaiyo iko kuumbwa kweakasiyana, 304 mhando yakanaka, asi mutengo unodhura, 201 yakaipa. 304 inosanganisira yekunze uye epamba simbi dzesimbi mahwendefa, uye 201 ipamba yemumba isina simbi.
Iko kurongeka kwe2,201 ndeye 17Cr-4.5Ni-6Mn-N, inova imwe simbi yekuchengetedza Ni simbi uye 301 simbi. Magnetically yakagadziriswa mushure mekutonhora kugadzira kwechitima mota.
Kuumbwa kwe3.304 ndeye 18Cr-9Ni, inova iyo simbi isina kunyanya kushandiswa uye isina kupisa kupisa. Kune zvigadzirwa zvekugadzira chikafu, Xitong michina yemakemikari, simba renyukireya zvichingodaro.
4.201 yakakwira manganese zvemukati, iyo yepamusoro inopenya ine yakasviba inopenya, yakakwira manganese zvemukati zviri nyore ngura. 304 ine yakawanda chromium, iyo yepamusoro matte, haina ngura. Kune maviri marudzi akaiswa pamwechete. Chinonyanya kukosha ndechekupokana nehurosi, 201 ngura inoshomeka, saka mutengo unenge wakachipa kwazvo. Uye nekuti 201 ine yakaderera nickel, saka mutengo wakaderera pane iyo 304, saka kuramba ngura hakuna kunaka se304.
5.Musiyano uripo pakati pa 201 na 304 idambudziko renickel nemanganizi. Uye mutengo we304 wave kudhura zvakanyanya, asi zvirinani makumi matatu nemana zvinogona kuvimbisa kuti hazvizove ngura panguva yekushandisa. (Shandisa potion yesimbi isina simbi kuyedza)
6.Simbi isina simbi haisi nyore kuita ngura nekuti kuumbwa kwechromium oxide pamusoro pemuviri wesimbi kunogona kuchengetedza muviri wesimbi, 201 zvigadzirwa zvakakwirira manganese simbi isina simbi 304 kuomarara, yakakwira kabhoni uye yakaderera nickel.
7.Composition yakasiyana (kunyanya kubva kabhoni, manganese, nickel, chromium ine 201 simbi isina simbi kusvika 304).
Pashure: 316Ti inotonhora yakakungurudzwa simbi isina simbi coil
Zvadaro: 310s inopisa yakakungurutswa simbi isina simbi coil